Hawlgallo ciidan oo ka socda gobolka Hiiraan - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Hawlgallo ciidan oo ka socda gobolka Hiiraan
Hawlgallo ciidan oo ka socda gobolka Hiiraan
October 1, 2018 admin587
Hawlgallo ciidan ayaa ka socda gobolka Hiiraan, gaar ahaan inta u dhaxeysa Magaalooyinka Beledweyne iyo Buuloburde, Taliyaha amniga magaalada Beledweyne Dhamme Carab ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyey hawlgalada lagula dagaalamayo ururka Al Shabaab ee ka socda gobolkaasi.
Sarkaalkan ayaa ujeedada hawlgaladan ku sheegay inay yihiin sidii la isugu furi lahaa wadada xiriirisa magaalada Beledweyne iyo magaalada Buula-burde oo ka tirsan Hiiraan.
Wuxuu sheegay si arrintaasi ay u suuragasho in loo baahan yahay in shacabka ay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka, wuxuu tilmaamay hadii ciidamada iyo shacabka ay wada shaqeeyaan in la gaarayo guulo waa weyn.
“Saacad kasta ayaan u soo jeednaa sidii aan amniga u sugi laheyn, dadka waxaan ka codsaneynaa inay nala shaqeeyaan, waxaan dagaal culus kula jirnaa niman cadow ah, hawlgalka ujeedkiisa waa sidii la isugu furi lahaa wadada xiriirisa magaalooyinka Beledweyne iyo Buulab-burde”. Ayuu yiri Dhamme Carab.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa ururka Al Shabaab waxa ay weeraro dhabagal ah la eegteen ciidan hawlgal ka waday degaanada ku teetsan magaalada Beledweyne, dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaare kala duwan.
November 6, 2016 Duceysane